Kitapom-bola Solidis - Solidis
Inona no azonay omena anao?
Ianao dia orinasa malagasy amin’ny ankapobeny tsy voaray ao anatin’ny fomba fiasan’ny Banky na koa ireo orinasa mpamatsy vola madinika nahazatra hatramin’izay ary ianao dia eo ampanombohana ny asanao na koa te hampiroborobo kokoa ny orinasanao ianao
ny SCI, sampan-draharahan’ny SOLIDIS, dia manolotra anao vahaolana momba ny FAMATSIAM-BOLA MIVANTANA ary VOATOKANA ho famenon’ny antoka mba hanatsarana ny fahaiza-manaonao.
Inona avy ireo tombotsoanao?
Faharetan’ny valin-teny: ao anatin’ny 15 andro aorian’ny nametrahana ny fangatahana
Famatsiam-bola MIVANTANA mba hanamafisana ny sehatra ara-bolanao
Fanampiana ara-teknika sy fanaraha-mason’ny mpiray ombon’antoka iray misongadina.
Fitantanam-bola any ivelany
Fahalefahana amin’ny tetiandron’ny famerenam-bola, arakaraky ny karazan’asa.
PME/PMI ara-dalàna na eo andalam-pikarakarana izany
Nijoro nandrita ny 6 volana farafahakeliny
Efa nihoatra ny sehatra mésofinance
Kitampom-bola tsy ampy
Tsy misy arakaraka, alefaso aty aminay ny tetik’asanao, ho dinihin’ny spesialista iray izany ary ho antsoiny ianao anatin’ny fe-potoana haingana indrindra.
Inona avy ireo fandaharana?
Fisian’ny tombom-barotra ara-bola sy ara-tsosialy amin’ny tetik’asa.
Fampiasam-bola amin’ny KITAPOM-BOLA(Equity): Taha ambany hatramin’ny 35%. Izy io dia fakana ampahany amin’ny kitapom-bolanao. Ny fialanay dia atao amin’ny fe-potoana niaraha-namaritra ary, amin’ny ankapobeny, amin’ny fe-potoana iafaran’ny trosa, ary mifototra amin’ny fanajariana ny orinasa.
Fampiasam-bola amin’ny TROSA(quasi-Equity): Ny kitapom-bola nomena isaky ny tetik’asa novatsiam-bola dia mety hahatakatra hatramin’ny 500 millions MGA. Izy io dia fampidirana vola ao anaty kaontin’ireo mpiray ombon’antoka, na koa fampindramam-bola iaraha-mandray anjara. Ireo dia fidiram-bola mitombona izay azo kilasiana ho trosa mihantona. Izy ireo dia natao hanatevina ny kitapom-bola mba hanamorana ny fahazoana ny tosika avy amin’ny Banky.
Ny faharetan’ny famerenam-bola : hatramin’ny 60 volana
Faharetan’ny fikarakarana: 15 andro fiasana manomboka amin’ny daty nametrahana ny fangatahana
TOLOTRA – ANTOKA (GARANTIE PAR SIGNATURE INDIVIDUELLE (GSI)
« Mila antoka ve ianao hoan’ny findramam-bolanao any amin’ny Banky? »
« Ampitomboy ireo fifanarahana ara-barotrao ao anatin’ny fiarovana tanteraka »
« Mahazoa mora foana tsenam-barotra na miankina na tsy miankina »
fanampiana ara-teknika sy ara-pitantanam-bola
« Midira ho mpikambana ary mankafiza ireo tombontsoa»